We Fight We Win. -- " More than Media ": မီးလောင်မှု ကို ဖေါ်ထုတ်ကြ
မီးလောင်မှု ကို ဖေါ်ထုတ်ကြ
၁- ဒီပေါက်ကွဲမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပေး။
၂- ဘာတွေသို့ လှောင်ထားသလဲဖေါ်ထုတ်ပေး။
၃- လူတွေ ဘယ်နစ်ယောက်သေဆုံးလဲ အမှန်ထုတ်ပြန်ပေး။( စာရင်းလိမ် မလိုချင်)
၅-နိင်ငံတော်က ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားလဲ ဖေါ်ထုတ်ပေး။
၆- တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို အပြစ်ပေး။
၇- မီးလောင်လို့ သေသွားတဲ့ လူထုတွေ ရဲ့ မိသားစု ကို လျောကြေးပေးရေး။
၈- သေဆုံးသွားတဲ့မီးသတ်တွေရဲ့ မိသားစုတွေကိုလျောကြေးပေး။ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပေးရေး။
Why don't you ask from inside burma??? You like Thingan Cannon.
ya right, you should come to inside !!!!!